Kukhunyuliwe - Mytika Speak
Ikhaya / Izinkondlo / Okuhluliwe
Ukubekezela ingane yangaphakathi
Ungamemezi lapho ubumsulwa bugeleza
Ukukhanya kwakho kuzonqoba
Amathegiukuqaphela haiku inkondlo izinkondlo isifinyezo izifundo ezingokomoya ingokomoya
Apreli 9, 2021 at 7: 07 pm
Sawubona! Ukuzama nje ukukwazisa ukuthi uqokelwe umklomelo we-Golden Bloggerz. Halala 👏👏. * Uma isiza sakho singenamklomelo, ngiyaqonda ngokuphelele futhi ngisebenzisa lokhu njengethuba lokukhombisa ukuthi ngiwazisa kakhulu umsebenzi wakho.
Apreli 9, 2021 at 10: 39 pm
Imibono ikuthinta kanjani ukubukeka komzimba?
Yini ubukhulu bomzimba?